Trano - Serivisy ara-dalàna an'ny fanjakana Prairie
Fampahafantarana ny Tale Mpanatanteraka Vaovaontsika: Denise E. Conklin
Ny volana Aprily dia volana mendrika ny trano!
Fantaro ny zon'ny tranonao.
Vonona izahay hiatrika ny dian'ny fandroahana
Tonga eto izahay hanompo ny fiarahamoninay. Mbola misy ny loharanon-karena.
Prairie State Legal Services dia manome fanampiana ara-dalàna maimaimpoana ho an'ireo olona manana fidiram-bola ambany na antonony.
Fanampiana fanampiana an'i Hotline Illinois
Fanampiana ara-dalàna maimaimpoana ho an'ireo mponina any Illinois miatrika fandroahana olona mety hitranga
INDRINDRA INDRINDRA ANAO?
Raha mieritreritra ianao fa afaka mahazo fanampiana ara-dalàna maimaim-poana hanafoanana ny faharesen-dahatra anao, kitiho ny “Learn More” na tsidiho ny newleafillinois.org hanombohana anio!
FANAMBARANA NY ASA
Miaraha amin'ny ekipanay amin'ny tolona hitondrana ny rariny mitovy ho an'ny rehetra.
Prairie State Legal Services dia manome maimaim-poana serivisy ara-dalàna ho an'ny olona ambany karama ary ireo 60 taona no ho miakatra izay manana aretina matotra olana ara-dalàna sivily ary mila fanampiana ara-dalàna hamahana azy ireo. Misy toerana birao 11 manompo Kaominina 36 any avaratr'i Illinois.
Fahazoana mitovy amin'ny fahamarinana
Isan'andro, ny olona manerana an'i Illinois dia holavina ny zo fototra ananan'izy ireo manan-kery eo ambanin'ny lalàna satria tsy mahay mpisolovava izy ireo. Iraka ataontsika ny manova izany.
Prairie State Legal Services dia manome fanampiana ara-dalàna maimaimpoana ho an'ireo olona tena mila izany ary afaka manome izany kely indrindra.
Ny fisian'ny fanampiana ara-dalàna sivily dia afaka manisy tsy fitoviana amin'ireo mpifanila vodirindrina amintsika izay miady amin'ny fijanonana ao an-tranony, mandositra ny herisetra an-trano, mahazo tombony azo antoka ho an'ireo veterana na olona manana fahasembanana, na miatrika olana ara-dalàna maro hafa izay tonga ao am-pon'ny fiarovana azy ireo. sy fiadanam-po.
Manodidina ny 690,000 ny olona ao amin'ny faritra misy anay no miaina anaty fahantrana. Manana fianakaviana, fanantenana ary nofinofy izy ireo. Mpifanila trano aminao izy ireo. Mipetraka ao amin'ireo vondrom-piarahamonina antsoinao hoe mody izy ireo. Ny vondrom-piarahamoninay dia toerana tsara kokoa ho antsika rehetra raha misy fanampiana rehefa ilaina izany.
Miaraha aminay isam-bolana amin'ny toeram-pitsaboana Restore, Reinvest, & Renew Legal ao amin'ny Tranombokim-bahoaka Kankakee, 201 East Merchant Street, Kankakee, IL 60901. Mianara momba ny lohahevitra ara-dalàna isan-karazany manomboka amin'ny famehezana firaketana sy ny fandroahana ka hatramin'ny fanakanana sy famerenana ny fahazoan-dalana mamily anao. Ny hetsika manaraka dia ny 26 mey momba ny Homeownership. Mianara bebe kokoa, eto: bit.ly/3kwbLOz	... See MoreJereo ny Less